နောင်ချိုမြို့ကို နှုတ်ဆက်ခြင်း | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
နောင်ချိုမြို့မှာ လေးညအိပ် နေထိုင်ပြီးတဲ့အခါ မြေပြန့်ကို ကျနော်ပြန်ရပါတယ်။
ရှမ်းပြည်မှာ ရောင်စုံစိုက်ခင်းတွေ နေရာအနှ့ံရှိနေပြီဆိုတဲ့သတင်းအပေါ်မူတည်ပြီး နောင်ချိုမြို့ကို ကျနော်ရောက်လာခဲ့တာပါ။ နောင်ချိုမြို့ဝန်းကျင်နဲ့ ရောင်စုံစိုက်ခင်းတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်၊ ရှမ်းပြည်ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေရေးမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ နောင်ချိုကိုရောက်လာခဲ့တာမို့ သုံးရက်လုံးလုံး နေ့စဉ် တနေကုန်တနေခမ်း ကားတစ်စင်းနဲ့ လှည့်လည်လိုက်လံကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါ မိမိရဲ့ဇာတိရပ်ရွာ မြေပြန့်ကိုပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။
လေ့လာချိန် အင်မတန်နည်းပါးပေမယ့် လယ်သမားသူပုန်ကြီး ဆရာစံရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကာလများကိုလည်း အနည်းငယ်လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါသေးတယ်။ နောင်ချိုက မပြန်ခင်အတွင်းမှာပဲ နောင်ချိုအကျဉ်းသား ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုလည်း ရေးခဲ့ပါတယ်။
ဝန်ခံရမယ့်အချက်နဲ့ ကျေးဇူးစကားပါးရမယ့် မိတ်ဆွေများလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဝန်ခံရမယ့်အချက်က ကျနော့်မှာရှိတဲ့ ခရီးစရိတ်အနေအထားဟာ နောင်ချိုမြို့မှာ လေးငါးရက်နေထိုင်ပြီး ကားတစင်းနဲ့နေ့စဉ်လှည့်လည်သွားလာလည်ပတ်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မလောက်ငှနိုင်ပါဘူး။ လူကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပြီး နောင်ချိုမြို့ သူ့မိဘများရဲ့အိမ်မှာ တည်းခိုခွင့်ရအောင်နဲ့ ကားငှား၊ နေရာဒေသအစုံ လိုက်လံပို့ဆောင်ကူညီခဲ့တဲ့ ပန်းချီဆရာမ ရှားရိုဖေါ၊ ဆရာမရဲ့ယောင်းမလေး ရှင်ဂွမ်းဂွိ၊ ဆရာမရဲ့မိခင်(အနော)နဲ့ မိသားစုဝင်များရဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုများကြောင့်သာ ကျနော့်မှာ ပါလာတဲ့ခရီးစရိတ်အနည်းငယ်နဲ့ မချို့မငဲ့ စိတ်တိုင်းကျ နေခွင့် လိုက်လံလေ့လာခွင့်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်တာမို့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်။
နောင်ချိုခရီးစဉ်မှာ တခြားအခက်အခဲတွေ မရှိခဲ့ပေမယ့် မမျှော်လင့်တဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကြောင့် ၂ ရက်တိုင်တိုင် မှတ်တမ်းပြုဓါတ်ပုံတွေ ပျက်စီးကုန်လို့ နောင်ချိုမြို့မှာ ဖြတ်ထားပြီးသားကားလက်မှတ်ကိုဖျက်သိမ်း၊ နောက်ထပ်တစ်ရက်ထပ်နေ၊ အဲဒီတစ်ရက်အတွင်း အရေးကြီးဒေသအားလုံးနောက်တချိန်ထပ်သွားပြီးမှ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲကိုတော့ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးတွေနဲ့အတူ တွဲတင်ခဲ့တဲ့ဓါတ်ပုံအားလုံးဟာ အဲဒီနေရာအားလုံး ဒုတိယအကြိမ်ထပ်သွားပြီးမှ ရိုက်ယူခဲ့ရတဲ့ဓါတ်ပုံများပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးဓါတ်ပုံတချို့ကြတော့ ဘယ်လိုမှပြန်လည်ရိုက်ယူလို့မရလို့ ပျက်စီးသွားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေထဲ ပါကုန်ကြပါတယ်။ ဥပမာ ဂုတ်ထိပ်တံတားမှာ လပြည့်ဝန်းကြီးကို ရိုက်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အင်မတန်လှပတဲ့ ဓါတ်ပုံမျိုးကြတော့ ပြန်ရိုက်ယူလို့မရတော့ပါဘူး။
ဆရာစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သမိုင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း အချိိန်မရလို့ အင်တာနက်အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေကိုပဲ အားကိုးလေ့လာခဲ့ရတာကိုလည်း ဝန်ခံရမှာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ၊ နောင်ချိုမြို့သွားခရီစဉ်အားလုံးဟာ ကျနော့်အတွက်အောင်မြင်တဲ့ခရီးဖြစ်တယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါ။
နောင်ချိုမြို့ဟာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ဒုတ္ထဝတီမြစ်နဲ့ မနီးမဝေးမှာရှိပါတယ်။ မန္တလေး၊ ကျောက်မဲ၊ လားရှိုး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွေနဲ့ ကားလမ်းပေါက်တဲ့မြို့ပါပဲ။ မန္တလေးနဲ့ ကားလမ်းအရှည် ၇၈ မိုင်၊ ရထားလမ်းအရှည် ၇၄ မိုင်ဝေးပါတယ်။ ကျောက်မဲကို ၃၂ မိုင်၊ ပြင်ဦးလွင်နဲ့ ၃၆ မိုင်ကားလမ်းအဝေးရှိပါတယ်။ လားရှိုးနဲ့ဆိုရင် ကားလမ်း ၉၇ မိုင်၊ ရထားလမ်း ၁၀၅ မိုင်လှမ်းပါတယ်။
နောင်ချိုကိုရောက်ရင် မည်သူမဆိုသွားရောက်လည်ပတ်လေ့လာသင့်တဲ့နေရာ သုံးခုရှိပါတယ်။ ဘန့်ဘွေးကျင်းရေတံခွန်၊ ဂုတ်ထိပ်တံတားနဲ့ ဂုတ်တွင်းချောင်းတောင်တက်ကားလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရောက်ဖူးသမျှခရီးသည်အားလုံး တသက်မမေ့နိုင်လောက်အောင် ထူးခြားလှပတဲ့နေရာများပါပဲ။
ကဲ ဒီနေရာမှာ ကျနော့်ရဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့ အခန်းဆက်ခရီးသွားဆောင်းပါးများကို နိဂုံးချုပ်ပါတော့မယ်။
နိဂုံးကို ကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ နိဂုံးချုပ်ချင်ပါတယ်။ နောင်ချိုမြို့ကလေးကို ကျနော် ဘယ်လောက်အထိ စွဲလန်းနှစ်သက်ခဲ့ရသလဲဆိုတာ ကဗျာထဲမှာ စာဖတ်သူများ ကောင်းကောင်းခံစားလို့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
နောင်ချိုရဲ့ လွတ်ရက်မရှိအကျဉ်းသား ဖြစ်ပါရစေ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ ကျိန်စာတိုက် လောင်တိုက်သွင်းခဲ့တာဟာ
ကိုယ့်ဒဏ်ရာ ကိုယ့်ဖါသာလျှာနဲ ့လျက် ချိုမြန်ခဲ့တာ။
အပြီးအပိုင် သေအောင်သာမြိုလိုက်ပါတော့။ ။
၂၄. ၁၁. ၁၈
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို ့
ည နှစ်နာရ ီ